ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: ဒေါ်မြင့်မြင့်အေး - ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အတူ ရပ်တည်မယ်
ဒေါ်မြင့်မြင့်အေး - ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အတူ ရပ်တည်မယ်
CEC and CC Meeting
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 12:46 AM
အဲသလို ဖြစ်ရမှာပေါ့ဗျာ ထောက်ခံပါ၏ ဗိုလ်အောင်ရွှေ ငကြောက်ကြီး
အယ်နယ်ဒီ ဖောက်ပြန်တော့မယ် ကြိုသိနေတယ် ခုချိန်ထိ အမတ်ရူးရူးတုန်း ဥပဒေ မဲ့ အုပ်ချုပ်နေတဲ့ အာဏာရှင် အစိုးရကို ဥပဒေ နဲ့ တိုက်မယ်ဆိုတဲ့ ငပေါကြီး အယ်လ်နယ်ဒီ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အတူရပ်တည်မယ် ဆိုတော့ဒေါ်စုကဘယ်လိုရပ်တည်နေသလဲ မရှင်းလို့ပါ
အင်အယ်ဒီ ခေါင်းဆောင်ကြီးများက ဘယ်ကလာသလဲ ပြန်ကြည့်ကြအုံး။ ပါတီကို ရေရှည်ကျမှ ပျက်အောင်လုပ်လိုက် သလိုကြီးများလား။ အခုလဲ တင်ရေး၊ မတင်ရေး တွေနဲ့ ရှုပ်နေတယ်။ အင်းလေ နဂိုကတည်းကမှ ဘာဆိုတာ သေချာမှ မရှိတာကို.. သနားစရာပါလေ.. ငှဲ့.ငှဲ့.ငှဲ့
Present situation is not only NLD's critical time,
SPDC/Gyokokes also scare if not NLD perform in this election, without NLD in election is meaningless and lack of favour by world wide.
can't do anything without Aung San Suu Kyi?
so Pity NLD, real Bull Shit
ဒေါ်မြင့်မြင့်အေး (မိတ္ထီလာ) ကို အပြည့်အ၀ ထောက်ခံအားပေးပါသည်။ ဦးအောင်ရွှေသည် မဆလကြီးဖြစ်သည့်နှင့်အညီ ပါတီနှင့် နိုင်ငံအတွက် မည့်သည့်အကျိုးစီးပွားမှ လိုလားသည်မဟုတ်ပါ။ အများသဘောနှင့် ဦးအောင်ရွှေကို ဖြုတ်ချပြီး တပြိုင်နက် ပါတီ၏ သဘောထားကို အမြန်ဆုံး ထုတ်ပြန်သင့်ပြီ။ ပါတီကွဲမှာကိုလည်း မလိုလားပါ။ ရာသီဥတုပြောင်းတိုင်း အရောင်ပြောင်းတတ်သည့် ပုတ်သင်ညိုများ အလိုမရှိပါ။ ဦးအောင်ရွှေ ဆက်လက် ချုပ်ချယ်နေရယ် NLD သည်၊ လုံးဝ ဖတ်ဆယ်၍မရသော သမိုင်းတရားခံကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မည်။ (ပြည်သူလူထု၏ ယုံကြည်မှုကို ဂရုမပြုမှုကြောင့်)
ဲပြည် သူလူထုကလည်း အဲသလို သဘောထားပြီး ဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကို ရင်ဆိုင်ဖို့ အထူးသဖြင့် အဖွဲ့ချုပ်ဒီမိုကရေစီလိုလားသူများနဲ့ တသား တည်း ရင်ဆိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်” (ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် - ဦးဉာဏ်ဝင်းမှ တဆင့် ပြည်သူသို့ ပြောကြားချက်)
အပေါ်က သူပြောသလိုပဲ ဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြန်ကြားတာသိရတယ် ဒေါ်စုဘယ်လိုရပ်တည်သလဲဆိုတာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရဘူး ရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ်ဝင်ဘူးလို့ဆိုတာပြတ်ပြတ်သားသားးမပြောဘူး မ၀င်ဘူးဆိုလဲ လုပ်ငန်းစဉ်ကို ညွန်ကြားသင့်တယ် ၀င်မယ်ဆိုလဲညွန်ကြားရမှာပဲ အခုသူကိုယ်တိုင်က လမ်းဘေးလက်ဘက်ရည်ဆိုင်ကထိုင်ပြီးသုံးသပ်တဲ့ အဆင့်လောက်ပဲ မတရားဘူး စိန်ခေါ်မှု ဘဲ ဘာညာပြောပြီး လူထုကိုပြန်တာဝန်ပေးနေတယ် ဒီရွေးကောက်ပွဲဖြစ်သွားရင်ပဲ လူထုမှာတာဝန်မကျေသလိုအချိုးမျိုးဖြစ်နေတယ် လူထုကိုအသာထားပြီး ကိုယ်ပါတီကိုပဲပြတ်ပြတ်သားသား ညွန်ကြားဆုံးဖြတ်စေချင်တယ် တစ်ချိန်လုံးလဲ ဒေါ်စုညွန်ကြားတဲ့အတိုင်း nld လုပ်ခဲ့တာချည်းပဲ ညီလာခံ ကထွက်ဆိုလဲထွက်လာခဲ့တာပဲ အဲဒီနောက်ဘာထက်မြက်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ် ချမှတ်နိုင်ခဲ့သလဲ အခုဦးအောင်ရွှေကမှ ကိုယ်ပိုင်အမြင်ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် ပါတီကိုအကြံပြုတယ် လက်ခံတာ လက်မခံတာ ပါတီအပိုင်းပါ အကုန်လုံးလူထုအပေါ်မှာပဲတာဝန်မပေးပါနဲ့ လူထုကအကယ်တန်း ၁၀၀ရာခိုင်နှုန်းပါတယ်ဆိုရင် ဒေါ်စုလည်းအခုလို အချုပ်ခံနေရမှာမဟုတ်ဘူး လူထုက ၈၈ကတည်းက တာဝန်ကျေပြီးနေပါပြီ